Izindlela Zokucwaninga Ngokunqamula Amakoloni - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJoel Onyango on I-13th Ngo-Ephreli 2021 I-13th Ngo-Ephreli 2021
Ishicilelwe ekuqaleni ku: izinyathelo-centre.org/blog/how-do-we-decoloniseonise-search-methodologies/
About the Author: UJoel Onyango
Ukwehlukaniswa kombuso yinqubo eqhubekayo yomzabalazo wokulwa namakholoni ohlonipha izindlela zaboMdabu zokwazi umhlaba, ukuqaphela umhlaba Womdabu, Abantu Bomdabu, kanye nobukhosi Bomdabu - kufaka phakathi ubukhosi phezu kwenqubo yokuqedwa kobukholoni (UDatta, 2017). I-AfricArXiv ineqhaza ekwehlukaniseni amakoloni ngokukhuthaza ukuqondwa kokukhishwa kwamakholoni ngamaphrinti; ukwamukela ukuthunyelwa ngaphambi kokushicilelwa ngezilimi zombili nolimi lwendabuko, nokuvumela ubunikazi bocwaningo lwase-Afrika ngabantu base-Afrika ngokusungula indawo esezingeni eliphansi, ephethwe yi-Afrika yezwekazi lase-Afrika.
Ngonyaka odlule, lolu bhubhane selugxile kakhulu endimeni yocwaningo kanye nobufakazi ekuthathweni kwezinqumo, kanye nobukhulu bendawo kanye nokungezwani kokuthi ucwaningo luqhutshelwa ngubani nokuthi lwenzelwe bani. I-Covid-19 isheshise izindlela zokwenza izinto ezindaweni ezithile, ivumela noma iphoqa abacwaningi ukuthi benze izinhlobo ezahlukahlukene zocwaningo ngokuhlukile: ngokwesibonelo, ngokubuyekezwa okusheshayo nokuhlanganiswa kobufakazi, izindlela zokuhlola kude, kanye nokusetshenziswa kobuchwepheshe bedijithali njengamapulatifomu aku-inthanethi, ezenhlalo imidiya, 'idatha enkulu' njalonjalo. Lokhu akusho ukuthi le yindlela ekhethwayo yokuzibandakanya ocwaningweni futhi lezi zindlela zinezinselelo zazo, kepha kuyisinyathelo sokubhekisisa izindlela.
Lolu bhubhane luphinde lwacasula abacwaningi abaningi ukuthi bazame izindlela ezikude futhi bathole ezinye izindlela zokuzibandakanya, okunethuba lokumelela kabi ucwaningo lwedeski njengocwaningo olunamandla. E-Global South, abacwaningi bahlole ukuthi lezi zindlela (nezinye) zisho ukuthini ezimeni zabo, ngenkathi becabanga nge-ajenda ekhulayo yocwaningo 'lokuqeda umbuso'.
Ubukoloni busetshenziselwe ukuchaza imiphumela yokwakhiwa kokubusa kwezepolitiki emazweni angaphansi. Imizabalazo 'yokuqeda umbuso' isuke ekuhlehlisweni kombuso wamakoloni kuya enseleleni ebaluleke kakhulu yokukhulula ulwazi, umkhuba namasiko ekugxileni kwamandla aphakeme emhlabeni wonke. Ngokubheka kwenhlangano ekhulayo yobukholoniyali ekhula emhlabeni wonke, ebuza imikhakha ehlukahlukene yobukholoni, kunezingcingo zokucwaninga nge-decolonise kanye nama-ajenda ocwaningo - okuvame ukuhlukaniswa nezimo nezimo zendawo.
Lokhu kusho ukuthi kunezinhloso zokucwaninga eziphethwe endaweni, nokusebenzisa ulwazi lwasendaweni, kufaka phakathi izingxoxo ngalokho okucatshangwayo okuphathelene nolwazi, amanani kanye nezinkolelo zocwaningo eNingizimu yeNingizimu.
Izincomo ezivela kumbhali
Ukwehlukaniswa kwamakholoniyali Ekuqondeni Kwethu NakuMongo Womhlaba Wonke
- Ukuvula isikhala sokucabanga kwamahhala
- Ukuvula izikhala zokuhlaziya izikhundla zamandla namasiko amakhulu
- Uma kubhekwa ubudlelwane bomcwaningi ne 'umcwaningi'(umuntu oyinhloko ucwaningo olubhekiswe kuye)
- Kuthululwa ukungezwani nokuqondiswa kwezigwegwe
- Ukuhlukaniswa kobukoloniyali kukwehlukahlukana
Siziqaqambisa Kanjani Izindlela Zokucwaninga Ngobukoloni?
- Nikela, lula futhi ubize izingxoxo mpikiswano ngobunzima be-decoloniality
- (Re) ahlole ukugeleza kwezimali zocwaningo
- Cabanga ngemibono eyahlukahlukene yezwe okugxila ekuziphatheni
- Amacala wedokhumenti aphonsela inselelo okujwayelekile
- Cacisa / wenze ngezifiso izinhlelo ezenza kube lula ucwaningo
Ngemininingwane, sicela ubheke ku: izinyathelo-centre.org/blog/how-do-we-decoloniseonise-search-methodologies/
Izikweletu zesithombe: Umfula iBuba eGuinea-Bissau, e-Afrika (Flickr / remusshepherd / cc ngo-2.0)
Mayelana ne-STEPS Center
I-ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre yenza ucwaningo lomhlaba wonke oluhlanganisa imikhakha yezentuthuko nezifundo zesayensi nobuchwepheshe. Umsebenzi wethu ukugqamisa, ukwembula kanye nokufaka isandla ezindleleni ezilungile nezentando yeningi ekusimeni ezibandakanya izidingo, ulwazi kanye nemibono yabantu abampofu nabacwaswa.
Categories:	Ulwazi LomdabuUkuhluka KwezilimiVula Ukufinyelela